အချုပ်ကားနဲ့ လက်ခုပ်သံ | ဧရာဝတီ
စနေလင်း| December 3, 2012 | Hits:1
| | ကျောက်တံတားနဲ့ ပန်းပဲတန်း မြို့နယ်တရားရုံးတို့မှာ လက်ပံတောင်း တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို ဒီနေ့မနက် ရုံးထုတ် စစ်ဆေးစဉ် ဝိုင်းဝန်းနှုတ်ဆက်ကြသူများ (ဓာတ်ပုံ – Steve Tickner / ဧရာဝတီ)
a December 3, 2012 - 6:50 pm ဒီအကြမ်းဖက်မှုကိုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးစစ်ဖို့လိုလို့လား၊သမ္မတခိုင်းတာဆိုရင်သမ္မတရှင်းပေါ့၊သမ္မတခိုင်းတာမဟုတ်ရင်အကြမ်းဖက်တဲ့တိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူပေါ့ဒီကိစ္စကတစ်ခြားကိစ္စတွေလိုမရှုတ်ထွေးဘူးလေရှင်းနေတာပဲ။စစ်အာဏာရှင်နာမည်ပြောင်းအစိုးရကပြည်သူတွေကိုမလှည့်ဖျားရရင်ကိုမနေနိုင်တာ။(ညစ်စုတ်တဲ့နည်းကိုစုံနေတာပဲ။)
Reply Salai Lian December 4, 2012 - 4:30 am The public is confident that they are on the right side and the government is terribly on the wrong side. Let the people who are not the victims or the crooks(Generals) decide and condemn the bullies.
Reply သာကီသွေး December 4, 2012 - 11:01 am ဟော့ဒီ